कस्तो छ तपाईको आजको भाग्य ? हेर्नुस् मंगलबारको राशिफल - Kantipath.com
आज मिति २०७६ साल वैशाख १० गते । मंगलबार । इश्वी सन् २०१९ अप्रिल २३ तारिख । शकसंवत् १९४१ । परिधावी संवत्सर । उत्तरायण, वसन्त ऋतु । नेपाल संवत् ११३९ चौलागा, वैशाख कृष्णपक्ष। चतुर्थी तिथि मंगलबार ।
मेष : कुनै क्षेत्रमा पनि हेलचक्र्याई नगरि काम गर्नु होला । सहज र सरल तरिकाबाट अनुकुल वातावरणमा काम गर्न पाईने छैन । व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दि कायम रहनेछ । आफन्तले धोका दिने छन् । आफ्नो धन अरुको लागि खर्च गर्नु पर्ला । अहार विहार नमिल्दा स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । साँझपख सामान्य सुधार आउनेछ ।
वृष : समयमा काम नगरे विग्रिने छन् । गरेका काम प्राय सफल हुने छन् । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । जीवन साथिको सहयोगमा महत्वपूर्ण काम बन्ने छन् । यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । साँझपख खर्चमा वृद्धि हुनेछ । स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या आउन सक्छ । काम गर्ने वातावरण विग्रिदै जानेछ ।
मिथुन : विरोधिको सक्रियताले काममा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ सजग भएर काम गर्नु होला । प्रयत्नपूर्वक गरेका काम सफल हुने छन् । व्यापार व्यवसायमा सुधार आउने देखिन्छ । नयाँ कामको बारेमा विचार विमर्श हुनेछ । समयको गति सगै काममा सरलता आउनेछ । शत्रुहरु कमजोर हुदै जानेछन् । आफन्तबाट सहयोग मिल्नेछ ।
कर्कट : सचेतर भएर काम गर्नु होला । हेलचक्र्याई गरेमा दुःख पाउनु हुनेछ । अनावस्यक चिन्ताले छोड्ने छैन । अरुले भ्रम छर्न सक्छन् विना सोच विचार कहि कतै हात नहाल्नु होला । पढाईमा अप्ठ्यारो हुन सक्छ । लगनशिल भई गरेका काम सफल हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी बढ्नेछ ।
सिंह : घरपरिवारमा दुख कष्ट हैरानी हुन सक्छ । काम गर्ने जोश जागर मर्नेछ । व्यापार व्यवसायमा अवनति हुनेछ । बचाएर राखेको धन खर्च हुन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । घरमा अतिथि आउनेछन् व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुनेछ । सहयोग गर्ने कोहि भेटिने छैन उल्टो कुरा काटेर बस्ने छन् ।
कन्या : अरान्ह पूर्व काममा आशा गरे भन्द बढि सफलता मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । काम गर्ने जोश जागर घट्ने छैन । आफन्तबाट सहयोग पाईनेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा अवसरको खोेजी होला । अपरान्हबाट भने समयले कम साथ दिनेछ । काममा विभिन्न समस्या आउने संकेत मिल्नेछ । खर्च बढ्नेछ।
तुला : ग्रह,गोचर ठीकै देखिन्छ । दिनको पूर्वान्ह भन्दा अपरान्ह बढि अनुकुल हुनेछ । आफ्ना कुरा आफैमा सिमित राख्नु होला । काम गर्न सके दाम कमाउन सकिनेछ । आफन्त भए पनि धन दिने काम सके सम्म नगर्नु होला । प्रयत्नपूर्वक गरेमा काम सफल हुने छन् । साँझपख कामले गति लिनेछ।
वृश्चिक : दुविधा हट्ने छन् । जोश जागरका साथ कर्म क्षेत्रमा लागिनेछ । गरेका अधिकाँश काम सफल हुनेछन् । उत्तम भोजन र आसन प्राप्तिको योग देखिन्छ । व्यापार व्यवसायमा उन्नति प्रगति हुनेछ । वौद्धिक व्यक्तित्वसँग सामिप्यता बढ्नेछ । आर्थिक कारोवारमा भने सचेत रहनु होला नत्र दिएको धन डुब्नेछ ।
धनु : समय त्यति अनुकुल देखिन्न नयाँ काममा हात हाल्नु पूर्व एकपटक सोच्नु होला । गरेका कामबाट आफु भन्दा अरु लाभान्वित हुनेछन्। व्यापार व्यवसायबाट सोचे जस्तो लाभ लिन सकिने छैन । व्यर्थको घुमाई फिराई बढि होला । अपरान्ह पछि समयमा सामान्य सुधार अउनेछ।
मकर : दिनको अधिकाँश समय अनुकुल नै देखिन्छ । अस्थिर मन लिएर काम नगर्नु होला । परिवारको सहयोगमा काम बन्ने छन् । व्यापार व्यवसायबाट आफुले सोचे भन्दा राम्रो आम्दानी हुनेछ । मनमा भएका भ्रम हटेर जाने छन् । सुखद समाचार मिल्नेछ । साँझपख भने स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ।
कुम्भ : काममा देखिएका समस्या हटेर जानेछन् । कार्य क्षमता र दक्षता बढ्नेछ । धेरै काम सजिलै बन्नेछन् । नोकरी तथा राजनीतिमा आँशिक सफलता मिल्नेछ । विरोधीका कारण लाभान्वित हुनुहुनेछ । आकस्मिक धन हात पर्ने योग छ । व्यापार व्यवसायबाट पनि आय आर्जन बढ्नेछ। आफन्तहरुबाट सहयोग मिल्नेछ।
मीन : समयको गति सगै समयमा सुधार आउनेछ । मानसिक तनावमा कमी आउनेछ । वैदेशिक यात्रा सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । पढाई लेखाईमा थोरै ध्यान जानेछ । अरुका काममा समय बढि दिदा आफ्ना धेरै काम अधुरा रहने छन् । तर साँझपख केहि काम सम्पन्न हुनेछन्। निमन्त्रणा आउनेछ।
Previous Previous post: जिल्ला नेतृत्व घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले के भने ?
Next Next post: पुरानो बसपार्कको नाममा ‘खुलामञ्च’ कब्जा गर्न भूमाफियाको चलखेल